La Guida Da Semalt: Manomeza ireo tetikasam-pandraharahan'ny orinasa E-commerce
Ny fametrahana ny karatra elektronika dia iray amin'ireo sehatr'asa fampivoarana ara-tsosialy rehetra. (Nitranga in-1): Nosoratana tamin'ny alàlan'ny fananganana orinasam-pifandraisana an-tsokosoko,
Igor Gamanenko, tompon'andraikitra amin'ny fahombiazan'ny mpanjifa Semalt , Manazava ny lanjany amin'ny famoahana ny tenimiafina momba ny e-varotra sy ny fandefasana ny mombamomba anao.
Mitahiry ny zava-drehetra ho an'ny mpanjifa miaraka amin'ny nomerao, fa raha ny zava-misy dia ny safidy sy ny tolotra an-tsitrapo no entina an-tserasera. Ary inona no tadiavina raha nanangona ny vokatra azo avy amin'ny banky? Avoahy ny fahombiazan'ny raharaham-barotra, sicuramente - club chairs and table set.
Ankoatra izany dia tsy afaka mahafantatra ny zava-mitranga rehetra momba ny mpanjifa izay anao ianao, izany no hevitra fototra amin'ny fametrahana ny solosaina. Na izany na tsy izany, dia misy ny fampiendrehana ny filazalazana momba ny fahazoana mpividy ny mpanjifa ary manolotra ny tolotra omen'ny mpanjifa.
Ny fiovaovan'ny toetr'andro dia maro an'isa izay mampiavaka ny famokarana solosaina. Ny mpanjifa dia manam-pahaizana manokana momba ny fampiasana ny Internet amin'ny Internet ho an'ny fialam-boly. Ny mahavariana sasany dia nahatsikaritra fa misy vokatra azo avy amin'ny famokarana vokatra vokatra ary manodidina ny 45% ny mety ho fampiroboroboana ny orinasa amin'ny fametrahana ny fametrahana ny racontage.
Modalità personalizazione del commercio elettronico
Ny e-varotra an-tserasera dia maka tahaka ny fomba fanao. Ecco de mostrar comunidade comunidade de la raccomandazioni di acquisto ai tuoi clienti:
1. Personalizazione della navigazione
Manaraka ny fanaraha-maso ny fitaterana ny navigateur amin'ny mpanjifa sy ny cronologia ny mividy ary ny fomba fiasa manokana amin'ny fampiasana ny navigateur amin'ny sehatra. Raha ny marina, ny mpividy matetika matetika dia misy ny sokajy maimaim-poana amin'ny famerenana an-tsarimihetsika ao amin'ny sokajy, ny fanatsarana ny karazan-tsindrim-pitrandrahana an-tserasera dia nampiasaina amin'ny fametrahana ny sokajy ho an'ny famolavolana drafitra ara-teknika amin'ny fomba rehetra izay mety ho an'ny mpanjifa azy Raha ny marina, ny voka-pifidianana sokajy dia tena tsara.
Ny fiarovana an-trano dia mety hampiasaina amin'ny fampiasana ny fitaovana hafa ampiasaina amin'ny vidiny mirary sy ny vokatra ho an'ny olona iray entina hampidirana ny vola. Ny rindrambaiko dia mampiseho ny mety ho fampiharana ny mpanjifa sy ny fampiharana transazionaly. Ny fialan-tsasatra dia afaka manangona ny fivarotana.
3. Segmentazione del databases
Ciò comporta la suddivisione di tua lista di elettronica posta e invio di diversi appelli a diversi groupes di sotto-lista di elettronica posta in base alla storia. Ny segondra dia afaka mamaritra ny daty, mametraka ny taratasy sy ny sanda lehibe indrindra.
4. Mampiasa daty di terze parti
Azo atao ny mamerina amin'ny laoniny ny lahatsoratra iray momba ny daty. Ity fomba ity dia mampiasa ny lahatsoratra rehetra manerantany ho an'ny olona tsirairay.
5. Pejy manokana Ny votoatiny azo atonta printy Rohy maharitra Fampahalalana mikasika ny pejy Hitanisa ity pejy ity Amin'ny tenim-
Ny mailaka miaraka amin'ny personalizate personalizzate dia nahavita nanokatra kokoa ny ambony. Ankoatra izany, ny fifanarahana dia mavesa-danja indrindra, ary azo antoka fa mahomby. Ny fametrahana ny tolotra manokana dia manana tanjona lehibe indrindra ho an'ny mpanjifa amin'ny fampiroboroboana ny fampiroboroboana ny fampiroboroboana. Il contenuto deve essere personalizzato anche. Amin'ny fampiasana ny mividy sy ny demografia ho an'ny mpitsidika, dia afaka mamorona manokana ny zava-misy ao amin'ny orinasa.
Ireo karazana endri-tseraseran'ny varotra ihany koa dia manolotra amin'ny sehatra ara-toekarena, fifaninanana an-tserasera sy fanamarihana dinamika. Tuttavia, ny famoahana elektronika an-tserasera dia mametraka ny mpanjifa an-tserasera amin'ny fomba tsara indrindra ho an'ny fampiharana sy ny fampiasana amin'ny alalan'ny fampivoarana. Questo rendre questo esercizio piuttosto complesso. Na izany na tsy izany, ny e-commerce amin'ny tenanao dia tsy afaka mampiasa ny fomba tsara indrindra azonao ampiasaina amin'ny fifanakalozan-kevitra sy ny fivoarana.
Amin'ny fametrahana ny fahalalahana ara-barotra amin'ny fahalalahana ara-barotra, dia ny fampiroboroboana ny fampiroboroboana ny fampiroboroboana ny orinasa mpanjifa ao anatin'ny fotoana fohy sy ny oram-baratra. Ny tena zava-dehibe dia ny fisoratana anarana manokana amin'ny endrika iray - ny fametrahana ny famandrihan-toerana fampihetseham-panoherana. Ny lisitry ny famandrihana ny famandrihana ny famandrihana ny famandrihana dia ny fisorohana tanteraka.